Weerar Dad American Ah Lagu laayay Oo ka Dhacay Kaniisad Kutaal Mareykanka.
Monday November 06, 2017 - 07:59:47 in Wararka by Super Admin
Khasaara lixaad leh ayaa ka dhashay weerar toogasho ah oo ka dhacay mid kamida gobollada ugu waaweyn wadanka Mareykanka taasi oo ka dhigan in 10 maalmood gudahood sedax weerar ay ka dhaceen Mareykanka.
Ugu yaraan 26 qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen toogasho ka dhacday gudaha Kaniisad kutaal gobolka Texas, goob joogayaal ayaa xaqiijiyay in ruux hubeysan uu gudaha ugalay Kaniisad islamarkaana uu laayay Baadariyaal iyo dad kale oo gudaha Kaniisadda cibaado gaaleed ujoogay.
Saraakiisha Booliska ayaa sheegay in rasaas xooggan laga maqlay degmada Sutherland oo qiyaastii 30KM ujirta magaalada caanka ah ee San Antonio.
War kasoo baxay FBI-da Mareykanka ayay ku sheegeen in Ninkii weerarka geystay ladilay balse ay rumeysanyihiin in dad kale ay weerarkan ku lug leeyihiin.
Madaxweyne Trump oo ku sugan wadanka Japan ayaa bartiisa Twitter-ka kusoo qoray in uu la socdo wixii dhacay islamarkaana ay baaritaanno wadaan.
Guddoomiyaha Gobolka Texas ayaa sheegay in weerarkan uu yahay midkii ugu xumaa ee Abid ka dhaca gobolkiisa wuxuuna ugu baaqay Booliska in ay sameeyaan baaritaanno dheeri ah.
Warbaahinta gudaha Mareykanka waxay sheegtay in Toogashada ka dhacday kaniisadda Sutherland ay tahay middii ugu khasaaraha badneed taariikhda inta la ogyahay ee Kaniisad lala beegsado.
Isbuucii lasoo dhaafay laba weerar oo 10 qof American ah ku dhinteen ayaa ka dhacay gobollada Colorada iyo New York oo dhammaantood katirsan dalka Mareykanka.
Nin Muslim kaligii duule ah ayaa degmada Manhattan gaari ku jiirsiiyay dad wadada marayay wuxuuna weerarkaasi dhaliyay dhimashada 8 qof oo 5 kamid ah ay kasoo jeedaan dalka Arjantiin.